နာရေးဆင်ဆာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » နာရေးဆင်ဆာ
Posted by ဆူး on May 16, 2011 in Copy/Paste, How To.. |6comments
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာ (သို့မဟုတ်) (ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ စာပေ၊ သဘင်၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု) စီစစ်ရေးအဖွဲ့ဟုဆိုရာ၌ မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မကိုက်ညီသော လျှပ်ပေါ်လော်လီဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုကိုထိခိုက်စေမည့်ဝတ်ဆင်မှု၊ ယုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းသောပြောဆိုမှု၊ အမိအဖ/သားသမီးမိသားစုများကြည့်ရှုရန် မသင့်လျော်သောပြကွက်များ၊ အမှုအရာများ၊ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာရက်စက်မှုပြကွက်များ၊ ဘာသာသာသနာကိုထိခိုက်စော်ကားမှု ဖြစ်ပေါ်သောအပြုအမူ၊ အသုံးအနှုန်း၊ အပြောအဆိုများ၊ အမျိုးသားရေးကိုထိခိုက်စေမည့်ပြကွက်၊ ပြောဆိုအမူအရာများ၊ အမျိုးသားရေးကိုလှုံ့ဆော်/ပုန်ကန်မှုကို ဖြစ်စေသောပြကွက်များ. . . စသည်စသည်တို့ကိုအများပြည်သူတို့အားမပြသသင့်၍ ပိတ်ပင်တားဆီးကန့်သတ်သတိပေးရသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းဟုကျွန်တော်နားလည်မိပါသည်။
အများပြည်သူတို့ကို (အခမဲ့) ကူညီဖေးမပေးနေသောနာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)
လှုပ်ရှားပေးဆပ်မှုများ၊ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုများပါရှိသောဗီဒီယို (DVD) အချပ်များကို (ကန့်သတ်) ဟုရေးသားရိုက်နှိပ်ကာအလှူရှင်များ၏ လှူဒါန်းမှုအစုစုတို့ကိုကျေးဇူးတင်သည့် အနေဖြင့်၎င်း၊ မုဒိတာပွားများနိုင်ရန်၎င်း၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဘာသာသာသနာကိုဦးထိပ်ထား၍၄င်း၊ လူငယ်များလူမှုရေးလုပ်ငန်းများ၊ လူသားချင်းစာနာစိတ်များ မွေးဖွားပေါ်ပေါက်လာစေရန်၎င်း ရည်ရွယ်ကာအလှူရှင်များအတွက် (အခမဲ့) လှူဒါန်းမှုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဗီဒီယိုဈေးကွက်အတွင်းသို့၎င်း၊ အများပြည်သူတို့အား၎င်း အခကြေးငွေဖြင့် ရောင်းချခြင်း လုံးဝမပြုခဲ့ချေ။ ဤနည်းဖြင့်လည်းအလှူငွေရှာခဲ့ခြင်းလည်း လုံးဝ (လုံးဝ) မဟုတ်ခဲ့ချေ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ရပ် အနေဖြင့်လည်းပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိ။ ဂီတပညာရှင်များကလည်းမေတ္တာ၊ စေတနာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာတို့ဖြင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သောအများပြည်သူတို့အားဖေးမကူညီပေးသော ကျွန်တော်တို့၏ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)အတွက် သီဆိုတီးခတ် ကုသိုလ်ယူပေးဆပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လူမှုရေးဂီတအဆိုတော်များ၏ သီချင်းသံစဉ်တို့ဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ ပေးဆပ်ခဲ့သော၊ လူသားချင်းစာနာစိတ်မွေးသည့်လေးနက်သောလုပ်ရပ်များ၊ ဗြဟ္မစိုရ်တရား (၄)ပါးကိုလက်ကိုင်ပြု၍ ပေးဆပ်မှုမှတ်တမ်းပုံရိပ်များဖြင့် ပုံဖော်ပြသပေးခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့နည်းတူ (ကန့်သတ်)အဖြစ် အများပြည်သူတို့ လက်ဝယ်သို့ ဝေငှဖြန့်ဖြူး ထုတ်ဝေနေသော UN အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့များ၊ NGO အဖွဲ့များ၊ ဆရာတော်ကြီးများ၏ (ဓမ္မဒါန) တရားတော်အခွေများလည်းများစွာရှိခဲ့ပါသည်။
ယခုမူ . . . ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ လှုပ်ရှားပေးဆပ်မှုများ၊ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဆပ်မှုများဖြစ်သည့် ဗီဒီယို (DVD) အချပ်၊ MTV အချပ်တို့အားဆင်ဆာတင်ရမည်တဲ့ဗျာ။
လူမှုရေးသမားများမပေါ်ပေါက်စေချင်၍လား . . . ဟူ၍ တွေးမိတော့သည်။
“မသေရာအမှန် မြတ်နိဗ္ဗာန်”ကိုရောက်နေကြပြီလားဟူ၍ မေးခွန်းထုတ်လိုက်ချင်ပါရဲ့။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့သူရဲကောင်းကြီးများဖြစ်ကြသောအဘမှိုင်း၊ ဆရာစံ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဦးသန့် စသည့် အာဇာနည်ကြီးများမသေဆုံးကြသေးပါ၊ ရှင်သန်နေဆဲဟုအားတက်တရော အတွေးစ၀င်မိတော့သည်။
ကိုယ့်သမိုင်း . . . ကိုယ်ရေးနေကြသည့် လူမှုရေးသမား (စစ်စစ်) များသာဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ဆင်းရဲသော မိသားစုဝင်များ၏ နာရေးအတွက်လည်းသင်္ဂြိုလ်ပေးသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ချမ်းသာသော မိသားစုဝင်များ၏ နာရေးအတွက်လည်းသင်္ဂြိုလ်ပေးသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် နိုင်ငံရေးမိသားစုဝင်များ၏ နာရေးအတွက်လည်းသင်္ဂြိုလ်ပေးသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ မိသားစုဝင်များ၏ နာရေးအတွက်လည်းသင်္ဂြိုလ်ပေးသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ လူမျိုးဘာသာမရွေးတို့၏ နာရေးကိစ္စများကို “သေသောသူသည် သုဿန်သို့ သက်သက်သာသာသွားသင့်သည်” ဟူသောဆောင်ပုဒ်အတိုင်းလူသားချင်းစာနာစိတ်ကိုလူသားပီသစွာပေးဆပ်နေသောအမျိုးကောင်းသား/သမီးများဖြစ်သည်။ ကျပ်တည်းမှု၊ မွန်းကျပ်မှုများကိုနာကျည်းမှု၊ ကလဲ့စားချေမှုတို့ဖြင့် ဖြေရှင်းပေးသောအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်။အမိနိုင်ငံတော်ကိုပုန်ကန်ကြမည့်သူများမဟုတ်။ နိုင်ငံတော်အာဏာကိုလုယူကြမည့် သူများလည်းမဟုတ်။ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာတည်းဟူသော မြတ်ဗုဒ္ဒ၏ ဗြဟ္မစိုရ်တရား (၄) ပါးတို့အားလက်ကိုင်ပြုကာသံသရာထဲကျင်လည်ကြကုန်သောလူသားများအားမိမိတို့ တတ်စွမ်းသရွေ့ နိုင်သလောက် နိုင်ငံတော်အားပံ့ပိုးဖေးမပေးမှုများကိုသာလုပ်ဆောင်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
“အော် … ငါ့ဘ၀နှယ် . . . ကမ္ဘာမြေပြင်ကိုရောက်တုန်းရောက်ခိုက်၊ ဘ၀ပေး အခြေအနေကြောင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အနုပညာနယ်ပယ်ထဲကိုရောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာဆင်ဆာအဖွဲ့ရဲ့ ဖြတ်တောက်မှု၊ ပိတ်ပင်မှု၊ သတိပေးမှု၊ တားမြစ်မှုတို့ကို ကြုံခဲ့ရတယ်။ ခုလည်း … မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကကနေပြီးအပြီးပိုင်ထွက်ခွာပြီးလူသားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကိုပေးဆပ်ပြန်တော့လည်းဒီဆင်ဆာအဖွဲ့ရဲ့ တားမြစ်မှု၊ ဖြတ်တောက်မှုတို့ကို ကြုံရပြန်ပါကလား” ဟု။
“အေးလေ … အရင့်အရင်ဘ၀တွေတုန်းက ငါကသူတို့ကိုဘာတွေများသတိပေး၊ တားမြစ်၊ ဖြတ်တောက်၊ ပိတ်ဆို့မှုဆိုတာတွေ လုပ်ခဲ့သလဲ” လို့။
“၀ဋ်ဆိုတာ လည်တတ်တယ်” ဟုသာ အရှုံးပေးရတော့မလို။ သို့သော် “ကိုယ်ပြုသောကံပဲ့တင်သံ . . . ကိုယ့်ထံပြန်လည်ဦးမည်” ဖြစ်တော့သည်။
(မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း ဆင်ဆာအဖွဲ့အစည်းဝေးမှ ပဲ့တင်သံပြန်ကြားမှု၊ ၁၄.၅.၂၀၁၁ ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ပြန်/ဆက်အရာရှိ၊ ဥပဒေအရာရှိ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့မှ ခေါ်ယူသတိပေးမှုတို့ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်အတူညအချိန်တွင် အိပ်မက်တစ်ခုမက်ခြင်းသာဖြစ်တော့သည်။)
ကျုပ်တို့ဆီ… ဆင်ဆာရုံးနဲ့ ကင်ပေတိုင်ရုံးမှားနေတယ်ထင်ပါ့…
အဲဂလောက် အစစ်အဆေး အမေးအမြန်းထူးနေတာ..
နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ကြောင့် မြန်မာပြည်တလွှားမှာ နာရေးကူညီမှု အသင်းများစွာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပေါ်လာတယ်။ နာရေးသာမက လူမှုရေး ကျန်းမာရေး ပညာရေး တွေအတွက်ပါ ကူညီအကျိုးဆောင်တဲ့ ပရဟိတအသင်းများစွာ ဖြစ်ထွန်းလာပါတယ်။
ကိုကျော်သူကြောင့် ရုပ်ရှင်မင်းသားတောင် ဒါမျိုးလုပ်တယ် ဆိုတဲ့ အမြင်သစ်မျိုး ဖြစ်ထွန်းလာပြီး လူချမ်းသာတွေ မြို့မျက်နှာဖုံးတွေ ကအစ ဒီအသင်းမျိုးမှာ ငွေအားလူအားနဲ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက် လာကြတယ်။
ဆင်ဆာဖြတ်ချင်ဖြတ်ပါ။ ကန့်သတ်မှုတွေလုပ်ချင်လုပ်ပါ။ အသိအမှတ်မပြုရင်နေပါ။
ဒီအသင်းကြီးနဲ့ ဒီမင်းသားလူထွက်ကို သမိုင်းကဂုဏ်ပြုလိမ့်မယ်။
မင်းသားလူထွက်လောက်တော့ ဘာမို့လို့လဲ…… ဘုရားဟောတောင် ဆင်ဆာလုပ်ခဲ့ဖူးသေးတာ…။ ၀ိသာခါကျောင်းအမကြီးရဲ့ အရင်ဘ၀က ဆုတောင်းလေ..။
ဒီပိတ်ပင်တဲ့သူတွေ သေသောအခါ သက်သက်သာသာသွားရပါ့မလားနော်။
နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီး စွန့်စားပြီးစတင်တည်ထောင်ရဲတဲ့ ကိုကျော်သူကိုလေးစားပါတယ်။